Dhabbilee Oromoo uumataa Oromoo Afaan fajeesuu irra of qusachuu qabu
Mootummaan wayyane Filaannoo bara 2005 demokrtawwa jeedhamee akkan humnan sagalee uumataa akka fudhatee uumatii ni beeka. Fillaannoo bodaa amoo wajjiralee mormitoota hunda cufudhan, miseensoota mormitoota hunda hidhuun, kan ajeesuun, kan hojii irra ariachuun, kan biyya basuun isaa ni beekama. Waara Paarlamaa galee ilee akka hindubanee goodhe paarlamaa keessati sagalee uumataa ugura irra ka’uun isaa ni beekama. Miseensoota Paarlamaa na dura dhabatuu jeedhe yaadee hunda qabee reebuu , ajeesuu, biyya arii’uu maatii isaan dararaun isaa beekamadha. Ergasii Filaannoo bara 2010 irrati amoo gutuman gututi Mormititoa ari’atee ogganoota mirmitoota dabalatee mo’atamuun isaa labsamee TPLF Paarlamaa gutuu qoofa dhunfachuun isaa ni beekama.
Dhabilee Oromoo waan kana hunda uttu beekan rakko uumataa Oromoo irra ga’’e utuu hubatan, lammii reebamee utuu madan isaa hin fayiin, warii maatiin isaa du’’ee utuu gadda keessa hin ba’iin, hanga ama hojii malee dararama kan jiran utuu hojiiti hin deebiyiin, warii hidhamee akka obbo:
Bekele Gerba, deputy Chairman of the opposition Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM).
Berhanu Emiru is executive members of the Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM
Olbana Lelisa of the Oromo People’s Congress party (OPC)
Utuu hidha jira, Dhaabilee Oromoo tokko tokko Mootumman TPLF filaanno dhuga akka adeemsisuuf deemuu, kana irrati hirmachuuf qoophi ta’uu isaan Media adunyuatii ba’aan ibsuun amassi siirna torora kana dhugomsuuf hojeechu dha. TPLF Obbo Bekele Garba faa yaaka tokko malee hidhee mani hidha finfinneeti ilee bakka dhabeefi Zuwayti geegse rakkisaa jiru, miseensoota dhabbilee Oromoo fi uumataa oromoo hafee waliin fira fi nagga ta’ee filannoo gegesaa jeechun soba. Oromoo wagoota 20 ol mana hidhati yaaka tokko malee rakkacha kan jira utuu mana hidhatii hin ba’iin TPLF waliin hojeechuuf waada seene jeechuun akka Lichoo Bukura warana diire irra fudhan geesean hisisun waliin tokko. TPLF yeero ama kana kara garee fi gooxii ganda Oromiyya keessa facasuun OLF harka latee filannooti dhiyachuuf deemati ama kassati filaanoof of qoophessati ABO fi OPC moo’achuu jabadha jeechuun Oromoo gowomsaa jiru.
Dargagoon Oromoo tokko tokko amoo dhimma kana utuu hin xinxaliin olala wayyaneen jaja’aa jiru. Baratoon Oromoo Kumatami Universty hunda keesaa ari’amani yeeroo jiran kanatii, baratoon kan mana hidha keessati dararama yeeroo jiran kanati, Baratan hojii hojeechuu mirga dhaban yerro jiran kanati TPLF deemoktrtawadha jeedhan yaadun of gomsudha. Miseensoon Paarlamaa Mana hidha keessati dararma yeero jiran kanati TPLF filannoo demokrtawwa gegesuuf deema jeedhan ibsaa dhabbilee Oromoo basan afaan faja’uun walaluma gudadha. Baratoon Oromoo University hunda jira fi dargagoon Oromoo hundi, Uumaani Oromoo fi Miseensoon OPDO dabalatee TPLF tufii gadhee ishen Oromoo qabduu ni beekuu. Maliif Oromoo yeeroo hunda Habasha amanee akkan gowomuu nu galuu didee. Dhugadha warii ibsaa basuu kun Maatiin isaa akka maatii Bekele Garba, Olbana Lelisa, Brhanu Emiru , Asfaw Angasuu faa Bela’aa hin jiran, Namoon kun waggata 20 darbee yeero Oromoo ajeefamuu fi hidhamuu biyya ari’atamuu isaan TPLF waliin nagaa mari’atuu kanaaf waan mada’aan hin qaban.